Dabagalka Wararka 16 05 2016 Shirka dowladaha hoose oo maalinka beri ah ka furmaya Cadaado & Madaxweyne Axmed. - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Dabagalka Wararka By: Wariye Cali NuurPrimary - Xulka
Dabagalka Wararka 16 05 2016 Shirka dowladaha hoose oo maalinka beri ah ka furmaya Cadaado & Madaxweyne Axmed.
Warka 16 05 2016 M. Xasan & duqa magaalada Muqdisho oo shacabka ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska.
Warka 17 05 2016 M. Xasan oo waraaqihiisa aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee koofur Kuuriya.
FAALIYAHA QARANKA 08 09 2018 Soomaaliya oo hormuud ka noqotay shirka Afrika iyo Shiinaha
Shacabka oo bislaaday & sidee wax looga qaban karaa Dood wadaag 20 10 2017
Dabagalka Wararka 25 07 2016 Turkiga oo raashin badan keenay iyadoo qeybintiisa looga fadhiyo.
Faaliyaha Qaranka 26 03 2016 Dowlada & dadka koofur Soomaaliya oo ku ceeboobay in abaaraha…
Dabagalka Wararka 29 03 2016 Odayaasha Hawiye oo kulan ku saabsan maamul u sameynta Banaadir…